MEGAN LOVE ISLAND ၏လက်မ - MEGAN ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လက်မနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ် - သတင်း
သူမသည် Love Island ရှိမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအပြုအမူသည် Megan ကိုအများပြည်သူသိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလူတိုင်း Megan ၏လက်မများအပေါ်စိတ်ထဲတွင်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံကလူတွေကသူတို့ကလိုက်တယ်လို့ထင်နေလို့ပဲ။
နောက်ဆုံးတွင်တွစ်တာမှလူတစ် ဦး သည်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုထွက်လာသည်။ ဒန်နီယယ်လ်အမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကပြောကြားရာတွင် Megan ၏ထူးခြားသောလက်မများသည် 'Brachydactyly type-D' ဟုခေါ်သည့်မျိုးရိုးလိုက်သောချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်ပြီးသူမကိုယ်တိုင်ခံစားနေရသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။
Megan သည်မျိုးရိုးလိုက်သည့်ချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်သော Brachydactyly type-D ဟုခေါ်သည့်လက်မများကိုစုစည်းထားသည်။ တော်ဝင်သွေးထွက်သံယိုအတွက်အလွန်ဘုံ။
Megan Fox မှာလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကငါ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးရယ်နေသလား။ #Loveisland pic.twitter.com/jex3S6jGnw
- ဒန်ယဲလ် Louise (@danidotx) ဇွန်လ 29, 2018
လက်မကိုစွန့်ခွာခဲ့သည့်အကျော်ကြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး Megan Fox ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အမှန်တကယ်အခြေအနေရှိသော်လည်း၎င်းသည်တွစ်တာရှိလူများအားသူမ၏လက်မကို 'toe thumbs' ဟုခေါ်ပြီး Megan ကင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Megan ရဲ့ခြေချောင်းလက်မအားဖြင့်အမာရွတ်! ?? #loveisland pic.twitter.com/fiCVrVNQmS
- ဘရက် (@BrettHorne) ဇွန်လ 30, 2018
Megan ကခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေဖြတ်သန်းသွားသည် #LoveIslanduk pic.twitter.com/NYZAEUvIsr
- alex papworth (@ alexpaps18) ဇွန်လ 27, 2018
Brachydactyly ကိုကုသရန်ခွဲစိတ်ကုသမှုသည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်အလှကုန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားအလုပ်များလုပ်နေသော်လည်း Megan သည်သူမ၏လက်မကိုပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်ခြေလှမ်းမလှမ်းသေးပေ။
ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏အဆိုအရဤသည် Love Island မှ Megan ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်သည်
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Love ကျွန်းဂျော်ဂျီယာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောအမျိုးသားရတနာနှင့်မထိုက်တန်ပါ